C/weli Gaas oo maanta ku wajahan magaalada Boosaaso xilli ay halkaasi ka dhaceen dilal kala duwan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/weli Gaas oo maanta ku wajahan magaalada Boosaaso xilli ay halkaasi ka dhaceen dilal kala duwan
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa la filayaa in saacadaha soo socdo uu ka amba-baxo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoona kusii wajahan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Madaxweyne C/weli Gaas ayaa magaalada Muqdisho seddaxdii todobaad ee ugu dambeysay ka qeyb-galay shirkii madaxda madasha qaran, waxaana shirkaasi looga hadlaayay doorashada guddoonka cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya oo bishaan Janaayo gudaheeda dhici doonta.
Sidoo kale, C/weli Gaas ayaa mudadii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu heshiis cusub la galay madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, wuxuuna heshiiskaa ka koobnaa seddax qodob.
Heshiiskaasi ayaa ah mid lagu soo afjaraayo colaadda ka taagan magaalada Galkacayo, islamarkaana la isku furo ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka labada dhinac.
Si kastaba ha ahaatee, safarka madaxweyne Gaas ee magaalada Boosaaso ayaa kusoo beegmaysa xilli magaaladaasi seddaxdii todobaad ee ugu dambeysay ay ka dhaceen dilal loo geystay saraakiil ka tirsanaa maamulka Puntland, islamarkaana amniga magaaladaas si weyn loo adkeeyay.